एपेन्डिक्स के हो र कहाँ दुख्छ ? पढ्नुहोस्… GoodNews24 – GoodNews24
Home/अन्य/एपेन्डिक्स के हो र कहाँ दुख्छ ? पढ्नुहोस्… GoodNews24
एपेन्डिक्स के हो र कहाँ दुख्छ ? पढ्नुहोस्… GoodNews24
एपेंडिसाइटिस भनेको एपेन्डिक्स सुन्निनु हो,पेटको तल्लो दायाँपट्टि औंलाको आकारको थैली हुन्छ जसले कोलोन संग सहकार्य गर्दछ। एपेन्डिसाइटिसको कामबारे अहिलेसम्म यकिन जानकारी छैन । कोही एपेन्डिसाइटिसलाई राम्रो व्याक्टेरियाहरुको घर भन्छन्, भने कोही यसलाई काम नलाने अंगको रुपमा लिन्छन् । एपेन्डिसाइटिस ठूलो आन्द्राको पुछारमा हुन्छ ।
एपेंडिसाइटिस सामान्यतया तपाईको पेटको बीचमा हुने दुखाइबाट सुरू हुन्छ जुन दुख्ने र ठिक हुने हुन सक्छ। केहि घण्टा भित्र,दुखाई पेटको तल्लो दाहिने हाततर्फ सर्दछ, जहाँ एपेन्डिक्स सामान्यतया अवस्थित हुन्छ, र एपेन्डिक्स पेन कहिले स्थिर त कहिले गम्भीर हुन्छ। यस क्षेत्रमा थिच्दा,खोकी लाग्दा वा हिँडाइले एपेन्डिक्स पेन अझ नराम्रो हुन सक्छ।
एपेंडिसाइटिस तल्लो दाहिने पेटमा पिडा हुनुको कारणले हुन्छ । तर धेरै व्यक्तिमा ,नाभीको आसपास दुख्न शुरू हुन्छ र दुखाइ बढ्दै जान्छ । एपेन्डिक्स बढि सुन्निदै जाँदा दुखाइ पनि बढ्ने र अन्तत गम्भीर स्थितिमा पुग्दछ । एपेन्डिक्सको तहमा अवरोध आएको अवस्थामा एपेन्डिक्समा संक्रमण हुन्छ र यो नै एपेन्डिसाइटिसको हुने सम्भावित कारण हो। ब्याक्टेरियाहरु द्रुत गतिमा गुणा हुन्छन , जसको कारण एपेन्डिक्स सुन्निने फुल्ने र पिप भरिन थाल्छ। एपेन्डिसाइटिस भए छोटो समयमै पेटको सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अप्रेसनलाई एपेन्डेटोक्मी भनिन्छ । एपेन्डिसाइटिसको सम्भावना हुनेबित्तिकै सर्जरी गर्ने सल्लाह दिने गरिन्छ । यसको शल्यक्रिया गर्दा अन्य दीर्घकालीन समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ । यदि तुरून्त उपचार गरिएन भने एपेंडिक्स फुट्न सक्छ ।
जो कोहीमा पनि एपेंडिसाइटिस हुन सक्दछ, प्राय: जसो यो १० र ३० वर्ष बीचका व्यक्तिहरूमा हुन्छ। यसको सर्वोत्तम उपचार एपेण्डिक्सको शल्यक्रिया गरेर हटाउनु हो।
एपेन्डिसाइटिसका लक्षणहरु यस्ता हुन सक्छन :
– तल्लो पेटको दायाँपट्टि अचानक दुखाइ
– अकस्मात दुखाई जुन तपाईको नाभीको वरिपरि शुरु हुन्छ र प्राय: तपाईको तल्लो दाहिने पेटमा सर्दछ
– खोक्दा या हिड्दा बढि दुख्ने ।
– बान्ता हुनु ।
– भोक कम लाग्ने ।
– हल्का ज्वरो आउनु बिमारी बढ्दै जाँदा अझ ज्वरो बढ्न सक्छ ।
– कब्जियत वा पखाला लाग्नु
एपेन्डिक्स कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा उमेर र तपाईंको एपेण्डिक्सको पोजिसनको आधारमा भिन्न हुन सक्दछ। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने दुखाई पेटको माथिल्लो भागबाट आएको जस्तो महशुस हुन्छ किनभने एपेंडिक्स लेबल गर्भावस्थामा अधिक हुन्छ।
[irp posts=”3930″] [irp posts=”4008″]
दशैँपछि पठनपाठन शुरु गर्दै गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय-GoodNews24
एनएमबी बैंकको नयाँ व्याजदर घोषणा-Goodnews24
अविवाहित महिलाले भत्ता पाउने- गुड न्यूज